Burma Partnership » 1988 Uprising
Posts Tagged ‘1988 Uprising’ (29 found)
We are honored to let all our leaders, friends and supporters know that we have supported, contributed and fully participated in the three day commemoration of 25-year anniversary of the 1988 democracy uprising. We were able to have an open and healthy discussion onavariety of issues including national reconciliation […]
August 12, 2013 • By Burma Partnership • Tags: 1988 Uprising, 8888 Anniversary, Burma Partnership • Read more ➤
ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ငွေရတု ကြေညာစာတမ်း
ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ၊ နယ်စပ် အသီသီး ရှိ ၈၈ မျိုးဆက်အင်အားစုများ၊ ဒီမိုကရေစီပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ၊ လူထုအခြေပြုအင်အားစုများနှင့် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အင်အားစုများ၊ လယ်သမား၊ အလုပ်သမား များအပါအဝင် အလွှာစုံပြည်သူများသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၆ ရက်၊ ၇ ရက်နေ့များတွင် စုစည်းညီညွတ်စွာ တွေ့ဆုံ၍ ဆွေးနွေး၍ […]
August 12, 2013 • By 8888 Silver Jubilee • Tags: 1988 Uprising, 2008 Constitution, 8888 Anniversary, Burmese, National Reconciliation • Read more ➤
[Audio] Until two years ago, Myanmar, also known as Burma, was ruled by the longest-running military dictatorship in the world. In 2010, the military began to loosen its grip on the country, increasing civil freedoms and offering some political and economic opportunity for citizens.
But some are wondering whether the country can truly transition to democracy if it fails to reconcile with its brutal past […]
August 8, 2013 • Tags: 1988 Uprising, 8888 Anniversary • Read more ➤